Weebụsaịtị nkwalite SEO na Semalt
(n'okwu banyere otu mkpọsa nke ndị ọkachamara Semalt duziri)
Ọ bụghi ogologo oge gara aga, World Web bụ naanị ebe dị mma ịchọta ozi. Mana ihe niile agbanweela. Taa, Netwọk abụrụla ngwaọrụ dị ike maka ịkwalite azụmahịa. Akwụkwọ akwụkwọ, redio na ọbụna telivishọn enwekwaghị mmetụta mbụ ha. Enwere ndị mmadụ na-azụta akwụkwọ akụkọ. A ka nwere ndị na-ege ntị n’ụlọ ọrụ redio. A na-etinye ego na mkpọsa telivishọn, mana onye ọ bụla ghọtara na oge eruola maka eziokwu n'ịntanetị. N'ebe ahụ, ndị mmadụ na-akpata ego na ịzụlite ahịa na-aga nke ọma.
Oge ohuru abialarị
Nnukwu mgbanwe na nhazi ụwa na-eme n'ihu anya anyị. E nwere ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ mmiri na-agagharị na Web World. Teknụzụ ọhụrụ na-eto eto n’otu ike. Nwere ike ịnweta Netwọk site na ama ama gị - kirie vidiyo, gụọ akụkọ ma ọ bụ ... zụta uwe elu nwanyị ọhụrụ. Kwụ ụgwọ maka ngwongwo n'ịntanetị dị mfe karị. Onye nkịtị ugbu a nwere ike ịga ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, wagharịa gburugburu ebe a na-emepụta ngwaahịa, ma jụọ ajụjụ ha. Onye ọ bụla nwere ike ịnweta nzaghachi ozugbo n'ihi nzaghachi bụ ọnọdụ dị mkpa maka ọrụ ndị ahịa dị mma. Internetntanetị aghọọla ahịa ebe ị nwere ike ịzụta ihe niile, ma n'otu oge ahụ ngwá ọrụ ahịa siri ike. Mmụba akụ na ụba nke ụlọ ahịa n'ịntanetị na-egosi n'ezie uru nke ngwaọrụ weebụ. Ha nwere ike inyere ndị nwe saịtị aka ịbawanye ego ha na-enweta.
Nkwalite ntanetị bụ n'ezie maka ụlọ ahịa ọ bụla nke ndị na-azụ ahịa na-achọ ọrụ ma ọ bụ ngwongwo n'ime oghere mebere. Imirikiti ndị ọbịa ị bụ ọgaranya. Otutu ndi nwere ike izuru ahia na acho ngwongwo gi, mana choputa ihe ndi ha na ha choro. N'ihi gịnị? Ha mere n’okpuru anyanwụ na ndepụta ntanetị nke crawler n'ihi na ha buliri akụrụngwa ịntanetị ozugbo. Otu onye nwere ike ịchụpụ ma ọbụnakwa dochie ndị na-achọ ya? Ee, oburu na inyefe webusail n’aka ndi okacha amara nke Semalt.
Toga na ọkwa di elu
Onye ọ bụla mepere ụlọ ahịa maara ihe ọ bụ ịzụ ahịa na mpaghara obodo a na-akwanyere ùgwù. Onye ahịa ga-enweta echiche mbụ banyere azụmahịa gị tupu ị na-eleta. Ha na-ele anya na adreesị ụlọ ahịa ahụ wee tulee ugwu ọ nwere na ọkwa dị n'okpuru. Companylọ ọrụ, nke dị n'etiti etiti obodo, na ọtụtụ ndị njem na ndị ahịa bara ụba, ga-agaziri ọganihu. Ndị ahịa bara ụba ga-agbagoro gị ọsọ. Iwu a metụtara ọ bụghị naanị maka ndị azụmahịa. Ebe a na-agbatị ahụ, gyms, spas na-asọpụrụ iwu nke ugwu, dị ka ụlọ ahịa ma ọ bụ boutiques. It juru gi anya na ndi mmadu n’uwa nile n’emekorita ma o bu n’uche na-adabere n’otu echiche banyere ugwu? Y’oburu na ino n’isi iri kacha elu, a na-ahuta ihe i nweta dika akwanyere ugwu na ugwu.
Dịka ọ dị na ụlọ ahịa na-anọghị n'ịntanetị, ezigbo ebe dị na ebe mepere emepe na-adọta ndị na-azụ ahịa. Ọ bụrụ n’ịpụta nsonaazụ ọchụchọ dị elu, 95% nke ndị nwere ike ịzụ ahịa ga-elebara gị anya. Dika ogugu onu ogugu gosiputara, onu ogugu abuo nke ndi na acho bu ndi achoro igha banye na webusaiti nke icho. N'adịghị ka ụlọ ahịa na-anọghị n'ịntanetị, iru ọkwá dị elu ga-achọ ọ bụghị ọtụtụ itinye ego ego dị ka atụmatụ mmepe kwesịrị ekwesị. N'ebe a, ị ga - achọta ọ bụghị onye ọrụ pliable sitere na ọchịchị ime obodo, kama ọ bụ ọkachamara nwere ahụmahụ. Ekwesịrị ịkwụ ụgwọ ọrụ ha, mana ụgwọ ahụ dịkarị ala karịa ụgwọ ụlọ ịgbazite na ngalaba isi obodo ahụ. Mana ọbụlagodi mkpọsa azụmaahịa n'etiti etiti mba ụwa na atụpụta uche agaghị adọta ọtụtụ ndị na - eso mmadụ si mba dị iche iche dịka ọkwá dị elu na Google SERP.
Gini bu profaịlụ ahia ndi ahia?
Iji nye nyocha zuru oke nke ụlọ ahịa n'ịntanetị ma nwee ekele maka ọrụ a ga-arụrịrịrịrị, ọkachamara SEO kwesịrị inyocha ngwongwo na ọrụ. N'oge a, a na-emebe atụmatụ nkwado azụmahịa na atụmatụ ọrụ zuru ezu. Ka anyị leba anya n'otu n'ime mkpọsa Semalt na- aga nke ọma - Insignis , ụlọ ahịa ndozi ụlọ si Romania. Ọ na-ere ngwaahịa maka ime ụlọ na n'èzí (arịa ụlọ, oriọna, arịa kichin, ndị nwere oriọna, wdg). Companylọ ọrụ ahụ na-enye ọrụ dị elu na nnyefe ngwa ngwa nke isi obodo na obodo niile nke mba ahụ.
E nyochara visibiliti ọhụụ nke ụlọ ahịa www maka ogologo-ọnụọgụ, ogo, na obere olu nyocha. N'otu oge ahụ, ọkachamara ahụ Semalt mụrụ profaịlụ nke ndị iro na ndị isi ahịa iji mezuo uru ha. Emebere ya usoro nke weebụsaịtị ndị na - eme ihe n'ọhịa na profaịlụ njikọ ha, yana nyochawapụtara maka njikarịcha webpages dị ala. N'oge mbido, Semalt pro ga-achọpụta ma saịtị ahụ chọrọ ndozi n'ozuzu ya. Na njedebe, mmadụ nwere ike ịkwado ndozi nke saịtị ahụ - imewe, ụzọ, ọnọdụ na ọdịnaya nke ngọngọ ozi, imepụta ibe weebụ ọhụrụ.
N'oge a nke mkpọsa SEO , ọ bara uru ịtụle ma ịgbanwe CMS, ịgbanwe saịtị ahụ na ngwaọrụ mkpanaka, gụgharịa http na https, na ndị ọzọ. A na-atụle mkpa maka ndozi izugbe n'etiti onye ahịa ya tupu oge emefu ego maka nkwalite weebụ.
N'oge a, ndị SEO na-ezukọta, otu dị iche iche ma na-ekpebi ugboro ole agba ọmụmụ. N'ikwekọ n'ụdị nke ụlọ ahịa www, usoro ihe omumu nwere ike ịgụnye site na narị ole na ole ruo narị puku kwuru ajụjụ ọchụchọ. Ntọala a nwere ike were ọtụtụ ọnwa, yabụ emee ya na ọrụ ndị ọzọ. N'ihe banyere Insignis, anyị kpebiri ịkwalite mkpụrụedemede ndị jikọrọ ọnụ maka ibe akwụkwọ, ụdị ngwaahịa, yana ọdụ ogologo niile nwere ọkwa dị na 100. Ọnwa abụọ ka mmalite nkwalite ahụ gasịrị, anyị kwukwara edemede abụọ ọzọ. .
Ọdịdị sara mbara nke saịtị ahụ
Saịtị ọ bụla yiri osisi ebe ogwe bụ isi peeji, na ngalaba na isi bụ alaka na akwụkwọ. Ogo ole ihe owuwu ahụ ga-ezu ga-adabere n'ụdị ụdị saịtị ahụ. Ebe nwere otu peeji nwere osisi nke isi ya nwere ike itolite na ya. Insignis, dị ka ụlọ ahịa niile dị n'ịntanetị, nwere usoro dị mgbagwoju anya ma nwee ọtụtụ nhazi. Maka otu ajuju ajuju ichoro, ichoro ma bulie peeji ochicho. Ọ dị mkpa icheta na maka ajụjụ ọnụ ala dị ala, ọ ka mma ịkwanye ntanetị ngwaahịa ngwaahịa. Maka ajuju di elu, a na-ewulite ulo ulo.
Nkwuputa nke webpages ọhụrụ webata ga-apụta n’oge inyocha nyocha ngosipụta nke ndị asọmpi, yana ngwongwo na ụdị ọrụ. Maka nnukwu ụlọ ahịa weebụ yana ebe a na-ekesa ihe n’obodo dị iche iche, dị ka Insignis, ebe a na-ere ahịa na ụdị ndị nwere ọfịs ụlọ ọrụ, ọnụọgụ nke ibe peeji ga-abawanye site na ọnụ ọgụgụ obodo. Ọdịnaya websaịtị dị otú ahụ ga-abụrịrị iche. Na nnukwu oru, a na-eme websaịtị ọhụrụ ọfụma ọbụlagodi afọ abụọ kemgbe mmalite nke nkwalite saịtị. Iji nweta nsonaazụ achọrọ, a ga-akwadoro ọrụ bụ isi na ime ka ihe owuwu weebụsaịtị ahụ ngwa ngwa o kwere omume.
Ihe mgbaru ọsọ kachasị nke ime
Ọkachamara na-agbazi mmejọ nke njikarịcha mkpokọta nke esịtidem, na-arụ ọrụ na ntanetị webigide maka otu ajụjụ, na-ewepu mbipụta peeji. Iji mee nke a, a na-eme nyocha nyocha nke SEO nke saịtị ahụ na ntọala nke arụ ọrụ maka njikarịcha n'ime ime. N'ihe banyere Insignis, onye meziri njehie ahụ wee gaazie dozie nsogbu ndị bụ isi amụtara na nyocha nke teknụzụ.
Mmadu aghaghi ime ihe ndia.
ka ịgbakwunye meta meta mkpado maka ụlọ peeji site na iji mkpụrụ edemede ukwu dị mkpa dị mkpa;
itinye ngwa ngwa nke nzaghachi sava na ibe nke saịtị ahụ;
wepụ njikọ ndị gbajiri agbaji;
iji dozie njehie 404 niile ma gbaa mbọ hụ na URL niile ziri ezi;
iji mepụta data ahaziri nke typedị Azụmaahịa Obodo ma dozie okirikiri na ebe obibi ngwaahịa;
iji wepu ntughari nke URL site na iji ntụgharị oge nile, adreesị canonical, noindex soro;
iji dozie robots.txt iji mechie mkpado dị mkpa ma gbochie nyocha nke ibe iche iche na ịchọ ibe weebụ;
iji mepụta maapụ saịtị XML;
dee ederede SEO pụrụ iche maka ibe ya na isi ya na iji isiokwu ndị dị mkpa;
ịgụnye mkpado alt na-efu na eserese site na ọgbọ.
Ọ dị mkpa ọ bụghị naanị ịtọlite mpempe akwụkwọ ntanetị ala mana ịme njikọ n'ime ụlọ ka ndị ahịa na onye na-agba weebụ nwee ike ịbanye na ibe weebụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na emeghị nke a, ha nwere ike ghara ịpụta na ntinye akwụkwọ ọkọlọtọ web. Ọkachamara SEO na-ewulite njikọta nke nchịkọta nhọrọ site n'enyemaka nke edemede edepụtara, ebe ha na-agbakwunye na mbụ jikọtara ọnụ na jikọtara ọnụ, nyefee ihe ngosi dị elu site na ibe weebụ asọmpi dị ala na ibe nke ụlọ akwụrụ dị elu.
Njikarịcha ọdịnaya WWW
Onye njikwa ahụ na-emepụta akara meta pụrụ iche na isi H1 dabere na “ọdụ ọdụ ogologo” nke arịrịọ ọchụchọ maka ibe weebụ ndị ahụ ebe ọ dị mkpa. Ọzọkwa, maka ibe ndị a na-akwalite na ụlọ ahịa www, a na-etinyere ederede nke gụnyere ajụjụ ọchụchọ dị na mbụ, doro anya, na-eburu arịrịọ ugbu a nke ndị na-achọ weebụ. Ederede na-emetụta ogo abụọ na peeji nke site na ajụjụ ogologo-elu na ngosipụta nke ogologo ọdụ. N'ihe banyere Insignis, otu jisiri ike ruo ọkwa kachasị elu maka isi okwu-isi, yana ọdụ ọdụ niile ga-abanye 100 dị elu okporo ụzọ - oriọna / ọkụ / ihe ịchọ mma / kandụl.
Nke a bụ ọnụọgụgụ akwụkwọ kacha ọnụ ọgụgụ nke ihe nchọta Google nwere ike ịdọrọ maka oge a kapịrị ọnụ. A na-atụ aro ka ọ bụrụ naanị ndị ọkachamara nwere ahụike na-arụ ọrụ na atụmatụ ịkpa ego. Ọkachamara ahụ na - emechi “ibe ahịhịa” nke emere maka ọdịmma ndị ahịa naanị, na - egbochi ndị na - akpa weebụ na-eleta "ibe ahịhịa" ma mechie njikọ ha.
Mmelite Uru Weebụsaịtị
Ihe algorithms web crawler na-atụle ihe omume? Ha na-eme. Ọ bụ ya mere SEO-ọganihu ji arụ ọrụ dị ka:
nloghachi nke onye ahịa na ngosipụta ọchụchọ;
belata na ọnụego bounce;
mụbaa oge etinyere na webpage.
Ptnabata ụlọ ahịa www maka ngwaọrụ mkpanaka ga-eme ka ọhụụ pụtakwuo na saịtị a na nsonaazụ mkpanaka. Ọ na - eduga na ntụgharị dị elu site na ngwaọrụ mkpanaka. Ibelata ọnụ ụzọ ịnya ụgbọ ala na-agbago ọnụego. Properkpụrụ kwesịrị ekwesị nke ibe "Banyere Anyị" ga-eme ka ntụkwasị obi nke ndị ọbịa na ndị ntanetị siri ike.
Nlekọta weebụsaịtị nke dị na mpụga
Olee ihe bara uru nke a bara uru? Nke a bara uru maka saịtị ndị ahụ na-arụ ọrụ na mpaghara oke asọmpi. N'ebe ụfọdụ nke asọmpi dị ala, ị nwere ike ịme na-enweghị ịmepụta njikọ ndị na-abata. Mana maka ọtụtụ weebụsaịtị, njikarịcha mpụga bụ ihe a na-apụghị izere ezere. Ka saịtị saịtị ha nwere ngosipụta na-eduga gị, ka ị ga-atụkwasịkwu ntụkwasị obi ị bụrụ “n'anya” nke ndị crawlers weebụ. Enwere ọtụtụ paradaịs nke mmadụ gha eji wuo njikọ njikọ na ịhọrọ ndị na-enye onyinye.
Ntughari nke ukwuu site na ndị ọbịa na ndị ahịa
Oge a nke nkwalite weebụ chọrọ ịma maka okike, iji ya, ahịa email, yana ọbụna ike iji mepụta ọdịnaya dị elu. Ọkachamara SEO ebe a na-arụ ọrụ ndị a:
mezie mpempe usoro;
na-agbakwunye algọridim nke nkwukọrịta njikwa-njikwa;
na-agbanwe agba nke ihe webpage ihe;
na-arụ ọrụ na akaebe;
na-ahazi akwalite akwụkwọ ozi ahaziri iche.
Na nke a bụ naanị otu narị narị nke mmelite ahụ na-abawanye ntụgharị saịtị. Ọ bụrụ na ọ na-aga n’ihu nke Insignis, otu isi okwu-isi ụlọ ọrụ a buru ụzọ nọrọ na ogo nke TOP-10. Okwu ọzọ dị mkpa (maka otu kachasị mkpa) abanyelarị TOP-3. Ọganiihu nke azụmahịa n'ịntanetị abụghị echiche zuru oke. Enwere ike ikwuputa na eziokwu. Ọganiihu nke mkpọsa SEO maka ụlọ ọrụ Romania a maka ọnwa 6 gosipụtara na ọnụ ọgụgụ ndị a: isi okwu 232 dị na TOP-1, isi okwu 1136 dị na TOP-TEN (ma e jiri ya tụnyere ndị gosipụtara tupu mkpọsa ahụ - 4 na 55, n'otu n'otu). N'ime ọnwa mbụ, ọnụọgụ ndị mmadụ na-achọ ngwaahịa ndị a site na nchọta ahịhịa ejiriwo ihe karịrị 1000. Otu ga-ahụ ego na-abawanye na njirimara akara kachasị mma. Want chọrọ ka edebanye ibe niile na saịtị gị ọsọ ọsọ? Semalt ga-ahọrọ atụmatụ SEO kachasị mma maka gị.